सरकारी स्कूलमा सुतेर पैसा फलाउने मास्टरलाई कार्बाही खोई ? – Todays Nepal
सरकारी स्कूलमा सुतेर पैसा फलाउने मास्टरलाई कार्बाही खोई ?
नेपालमा सरकारी स्कूलमा कडाई पुगेको छैन। कुनै शिक्षक स्कूल नै आउदैनन, आए पनि राम्रोसँग पढाउदैन। कोही शिक्षक कक्षा कोठामै निदाउँछन! कोही कुरा धसेर समय बिताउछन! यस्तो गर्न पाईन्छ? सरकार कहाँ छ? विचरा विद्यार्थीहरू तिन डाँडा काटेर पढ्नको लागि आएको छन, त्यो सोचेको खोई त शिक्षकले?
आफ्नो छोरा छोरी बोडिङ्ग पढाउछन अनि सरकारी स्कूलमा अरूको छोराछोरीलाई जे गरेनि हुन्छ भन्ने यस्ता मास्टरहरूलाई जन्ताले मुख खोलेर विरोध गरौँ । यस्तो शिक्षकहरूलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही हुनु पर्यो।
यात्रुको ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिएर फरार भएका ट्याक्सी चालक पक्राउ
ट्याक्सीमा यात्रुले छोडेको ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ फिर्ता नगर्ने ट्याक्सी चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाण्डौले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्याक्सी चालकले पैसा भएको झोला नदिई फरार भएपछि अनुसन्धान गरी ट्याक्सी चालकलाई पक्राउ गरेको जनाएको हो । बुधबार ट्याक्सीमा बल्खुबाट कमलादीसम्म जाने क्रममा बारा जितपुर सिमर नारायण प्रसाद पाठकले ७ लाख ५५ हजार रकम भुलेका थिए, ट्याक्सी चालकले पैसा भएको झोला नदिइ फरार भएपछि पाठकले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए ।
सिसिटिभी फुटेजका आधारमा बा १ ज ३६५ नम्बरको ट्याक्सीका चालक २९ वर्षीया अशोक थापालाई नियन्त्रणमा लिएको परिसरका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रहरीले २० ग्राम अबैध लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित दुईजना पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा सुरुङ्गा नगरपालिका स्थायी घर भई हाल काठमाडौं नयाँ बसपार्क बस्ने २९ वर्षीय कर्णबहादुर सार्की र झापा सुरुङ्गाकै २६ वर्षीय रुद्रबहादुर सार्की रहेका छन् । त्यस्तै बिभिन्न १४ मसलसकका मुद्रा सहित एक जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
महानगरिय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले काठमाण्डौ भित्रिने सवारी साधना चेकजाँच गर्दा झापा जिल्ला अर्जुनधारा ८ बस्ने दिनेश गिरिका साथबाट नेपाली मुल्य अन्दाजी १५ लाख भन्दा बढिको बिदेशी मुद्रा फेला पारेको परिसरका एसएसपी पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै परिसरले काठमाडौंको माछापोखरीस्थीत बुद्धमल अगाडीबाट ठूलो मात्रामा लागूऔषध बरामद गरेको छ । लागूऔषध कारोबारी भने फरार रहेकाले खोजी कार्य तिव्र पारिएको परिसरले जनाएको छ ।
दिल्लीको फेसबुक पेजबाट लाइभ आएर नेपालीलाई यसरी सीम्झए सन्दिप लामिाछानेले, हेर्नुहोस् यो एक्सिक्लुसिभ भिडियो
नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको लागी आयो अर्को ठुलो खुसी को खबर